ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံး COVID ကာကွယ်ဆေးကိုဟာဝိုင်အီရှိအမေရိကန်နှင့်နိုင်ငံတကာခရီးသွားများအတွက်အခမဲ့ရနိုင်သည်
ပင်မစာမျက်နှာ » နောက်ဆုံးရဆောင်းပါးများ » ကနျြးမာရေးသတင်းများ » ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံး COVID ကာကွယ်ဆေးကိုဟာဝိုင်အီရှိအမေရိကန်နှင့်နိုင်ငံတကာခရီးသွားများအတွက်အခမဲ့ရနိုင်သည်
နိုင်ငံတကာသတင်းများ • Breaking ခရီးသွားသတင်းများ • စီးပွားရေးခရီးသွား • အစိုးရသတင်းများ • ဟာဝိုင်ယီသတင်းထူးများ • ကနျြးမာရေးသတင်းများ • သတင်း • ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း • ခရီးသွားလုပ်ငန်း • ယခုခေတ်စား • USA မှ Breaking News • သတင်းမျိုးစုံ
Longs Drugs စျေးလျှော့စျေး
ဟာဝိုင်ယီကျွန်းရှိဧည့်သည်များသည် Mai Tai အတွက်ဒေါ်လာ ၁၅.၀၀ + အခွန်နှင့်အကြံဥာဏ်များပေးကြသည်။ သို့သော် COVID ကာကွယ်ဆေးသည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးအကြံဥာဏ်များကိုလက်မခံပါ။
ဤအရာအားလုံးသည်ဟာဝိုင်အီပြည်နယ်နှင့်ဟာဝိုင်ယီအခွန်ထမ်းများ၏စေတနာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် COVID ကာကွယ်ဆေးထိုးထားသောကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များကိုလွဲမှားစေသည်။
ဟာဝိုင်ယီသည်အမေရိကန်ပြည်နယ်များစွာကဲ့သို့၎င်း၏နေထိုင်သူများအားလုံးကို COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးရန်မစည်းရုံးနိုင်ပါ။ အခုသူတို့ကဧည့်သည်တွေကိုကာကွယ်ဆေးတွေတိတ်တဆိတ်ပေးနေတယ်၊ ​​ပိုမှောင်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်။
ဟာဝိုင်ယီအခွန်ထမ်းများသည်ချမ်းသာသောနိုင်ငံတကာဧည့်သည်များကို COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအခမဲ့ထိုးရန်ဖိတ်ခေါ်သည်။
ဟာဝိုင်အီအုပ်ချုပ်ရေးမှူး Ige ရှိသည် ဧည့်သည်များအားအိမ်တွင်နေရန်တိုက်တွန်းခဲ့သည်မရ။ သူသည်ကာကွယ်ဆေးခရီးသွားဧည့်သည်များကိုအဘယ်ကြောင့်မပြောခဲ့သနည်း။
လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကဟာဝိုင်ယီတွင်တစ်ရက်လျှင်ကူးစက်မှု ၂၀-၃၀ ရှိသည်။ ယခုအခါပြည်နယ်အတွင်းခရီးသွားများရေလွှမ်းမိုးခြင်းနှင့်အတူ COVID-20 ကူးစက်မှုအသစ် ၁၀၀၀ နီးပါးနှင့်မှတ်တမ်းတင်သေဆုံးမှုများသည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုကြောက်မက်ဖွယ်ဖြစ်စေသည်။
ကုန်တိုက်များ၊ ဟိုတယ်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်များသည်စည်ကားလျက်ရှိသည်။ ဆွဲဆောင်မှုများသည်အချို့ကိစ္စများတွင်သုံးဆ ၀ င်ကြေးကိုကောက်ခံပြီးအလုပ်များနေသည်။ Waikiki ကမ်းခြေတွင်မျက်နှာသုတ်ပုဝါတစ်ထည်ထားရန်နေရာမရှိသော်လည်းဒုတိယ lockdown အသစ်သည် ပို၍ ပို၍ လက်တွေ့ဖြစ်လာသည်။
အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Ige သည်ခရီးသွားများကိုပြန်လည်စဉ်းစားရန်ဧည့်သည်များကိုမကြာသေးမီကတောင်းဆိုခဲ့သည် Aloha ပြည်နယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, ဟာဝိုင်အီရှိဆေးဆိုင်များ ကာကွယ်ဆေးထိုးရန်ဒေသခံမီဒီယာများနှင့် ၀ က်ဆိုက်များတွင်ကြော်ငြာများတင်ပါ။ အခမဲ့ကာကွယ်ဆေးများပေးခြင်းသည်သူတို့အတွက်ကြီးမားသောလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီးဆေးဆိုင်များကငွေပေးသည်။ လူတွေကိုအခမဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေရရှိဖို့စတိုးဆိုင်တော်တော်များများကသူတို့ရဲ့စတိုးဆိုင်တွေကို ၀ င်ဖို့စျေးလျှော့စျေးစျေးဘောက်ချာတွေချပေးတယ်။ ဟာဝိုင်အီတွင်ဧည့်သည်များပါဝင်သည်။
အမေရိကန်မှာကာကွယ်ဆေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဟာဝိုင်အီကဲ့သို့ခရီးသွားနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္Statesများကိုမှီခိုသောပြည်နယ်များသည်ကာကွယ်ဆေးစာရင်းအင်းများတွင်ပိုမိုကြည့်ကောင်းလာစေရန်တီထွင်ဖန်တီးမှုများကိုပြုလုပ်နေသည်။ ဒါကဟာဝိုင်အီပြည်နယ်ကခရီးသွားတွေကိုရိုက်ချက်တွေပေးနေရတဲ့အကြောင်းအရင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အာရှမှဟာဝိုင်ယီသို့နိုင်ငံတကာမရပ်မနားပျံသန်းနေသောလေကြောင်းခရီးစဉ်များကြောင့် Hawaiian လေကြောင်းလိုင်းများ၊ ဂျပန်လေကြောင်းလိုင်းများနှင့် ANA တို့သည်ခရီးသွားဧည့်သည်များကိုသဲဖြူကမ်းခြေများသို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ Aloha ပြည်နယ်။
ဂျပန်လူမျိုးများအတွက်ဟာဝိုင်ယီသို့ခရီးသွားခြင်းသည်အနစ်နာခံခြင်းမဟုတ်ပါ။ နိုင်ငံတကာဇာစ်မြစ်မည်မျှပင်ရှိနေစေကာမူဂျပန်သို့ ၀ င်ရောက်သောခရီးသွားများအားလုံးသည်တစ် ဦး အပေါ်မူတည်သည် ဆိုက်ရောက်ဗီဇာရောက်သောအခါ ၁၄ ရက်တာကိုယ်ပိုင် quarantine ပြည်တွင်းလေယာဉ်များ၊ အငှားယာဉ်များနှင့်ရထားများပါ ၀ င်သောအများသုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအသုံးပြုခြင်းကိုတားမြစ်ထားသည်။ ဟာဝိုင်အီမှအိမ်ပြန်လာသူတိုင်းသည်ဂျပန်တွင်သီးသန့်ခွဲနေရမည်။ ဘာ့ကြောင့်ဂျပန်လူမျိုးအချို့က ဟာဝိုင်ယီရဲ့ကမ်းခြေတွေကိုခရီးသွားတုန်း?
အရှေ့အာရှအပါအ ၀ င်နိုင်ငံအတော်များများမှာကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့အရေအတွက်ကနည်းပါတယ်။ Pfizer နှင့် Moderna တို့သည်အထိရောက်ဆုံးနှင့်ဝယ်လိုအားနည်းသော COVID-19 ကာကွယ်ဆေးဖြစ်သည်။ အချို့နိုင်ငံများတွင်ကာကွယ်ဆေးနှစ်မျိုးလုံးကိုအခမဲ့မရနိုင်ပါ။ အခြားနိုင်ငံများမှနိုင်ငံသားများသည်ကာကွယ်ဆေးရရှိရန်သူတို့၏အသက်တာစုဆောင်းမှုကိုအသည်းအသန်အဆင်သင့်ပြုလုပ်လေ့ရှိကြသည်။
Waikiki ရှိ Longs Drugs Minute Clinic မှသူနာပြုတစ် ဦး ကအမည်မဖော်လိုကြောင်းပြောခဲ့သည် eTurboNews:
“ ငါတို့ Longs Drugs မှာခရီးသွားတွေကိုကာကွယ်ဆေးထိုးခိုင်းတယ်။ ”
“ အများစုကဂျပန်တွေ၊ ကိုရီးယားတွေ၊ ဥရောပကဧည့်သည်တွေတောင်ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့တောင်းဆိုကြတယ်။ ငါတို့မှာဂျပန်စကားပြော ၀ န်ထမ်းတွေရှိတယ်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့တောင်းဆိုတဲ့ပြည်တွင်းဧည့်သည်တွေကိုလည်းငါတို့လက်ခံပါတယ်။ ”
“ ဟုတ်တယ်၊ ငါတို့ခွဲခြားတာမဟုတ်ဘူး။ စာရင်းအင်းရည်ရွယ်ချက်အတွက်တိုင်းရင်းသားနောက်ခံကိုတောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့ကနိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ နေထိုင်ခွင့်အခြေအနေစတာတွေကိုမတောင်းဘူး။ ”
ကာကွယ်ဆေးအတွက် Longs Drugs သည်နိုင်ငံခြားဧည့်သည်များနှင့်နိုင်ငံရပ်ခြားခရီးသွားများအတွက်ကာကွယ်ဆေးအတွက်မည်မျှကုန်ကျမည်နည်း။
“ ငါတို့အဲဒါကိုအခကြေးငွေမယူဘူး။ ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့သူတိုင်းကိုငါတို့စျေး ၀ ယ်လျှော့စျေးဒါမှမဟုတ်မက်လုံးတစ်ခုထပ်ထည့်တယ်။
"ငါတို့ကကမ္ဘာပေါ်မှာရနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးကာကွယ်ဆေးဖြစ်တဲ့ COVID Pfizer ဒါမှမဟုတ် Moderna ကာကွယ်ဆေး"
ကာကွယ်ဆေးမထိုးသောလူ ဦး ရေမည်မျှရှိသည်ကိုနိုင်ငံတော်ကမည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။
“ နိုင်ငံတော်ကငါတို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေကဘယ်ကလာတာလဲလို့မမေးဘူး။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်နံပါတ်ကဲ့သို့ ID နံပါတ်တစ်ခုအားကျွန်ုပ်တို့မှတ်တမ်းတင်သည်။ ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်ကိုရှင်းမယ်။ ”
ဟာဝိုင်အီပြည်နယ်သည် CDC သို့တင်ပြနေသည်ကိုကာကွယ်ဆေးထိုးထားသောနံပါတ်သည်မသန့်ဘူးလား။
“ ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေလဲ၊ ဧည့်သည်ဆိုတာဘယ်သူလဲဆိုတာနိုင်ငံတော်ကသိမှာမဟုတ်ဘူး။ လူနာအားငါတို့မေးသမျှသည်နောက် ၃-၄ ပတ်အကြာတွင်ဒုတိယအကြိမ်ရိုက်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒါကဟိုတယ်နဲ့အပန်းဖြေစခန်းတွေ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့စီးပွားရေးအတွက်ကောင်းတဲ့စီးပွားရေးလို့ငါထင်တယ်။ ”
ဤအချက်အပေါ် အခြေခံ၍ ဟာဝိုင်အီတွင် ၇၁ ရာခိုင်နှုန်းကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးပြီးပြည်နယ်တွင် ၅၁ ရာခိုင်နှုန်းအပြည့်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှုန်းမြင့်မားသည်မှာမှားဖွယ်ရှိသည်။
နိုင်ငံတကာတွင်တစ် ဦး တည်းဧည့်သည် ၁၀၀၀ ကျော်သည်ဟာဝိုင်ယီသို့နေ့စဉ်မရပ်မနားပျံသန်းသည်။ အမေရိကန်ပြည်မကြီးမှတဆင့်လေကြောင်းခရီးများဖြင့်နိုင်ငံတကာခရီးသွားဧည့်သည်များအများအပြားရောက်ရှိလာကြသည်။
ပြည်တွင်း၌ဟာဝိုင်ယီကာကွယ်ဆေးသည်ရက်ချိန်းမရှိဘဲလွတ်လပ်စွာ ၀ ယ်ယူနိုင်သောကြောင့်နေ့စဉ် ၀ င်ရောက်လာသူ ၂၀၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။
ဟာဝိုင်ယီအခွန်ထမ်းများသည်ကာကွယ်ဆေးအတွက်အဘယ့်ကြောင့်ထောက်ပံ့ကြသနည်း။ ခရီးသွားများသည်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့၊ မဆင်းရဲပါ။ အပန်းဖြေစခန်းတစ်ခု (သို့) လေကြောင်းလိုင်းက၎င်းအတွက်ပေးဆပ်ရန်ကူညီလိုလျှင်ကောင်းပြီ။ အိမ်ခြေမဲ့အရေအတွက်နှင့်ဟာဝိုင်ယီကျွန်းစွန်း၌နေထိုင်သောလူများစွာသည်ပြည်နယ်ကဲ့သို့သောကြီးမားသောလူမှုရေးပြသနာများကိုပြုစုရန် ၀ င်ငွေလိုအပ်သည်။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံအတော်များများသည် COVID ဖြစ်ပွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုကိုမှတ်တမ်းတင်နေကြသည်။ သူတို့ကကာကွယ်ဆေးကိုအရေးတကြီးလိုအပ်နေပါတယ်။ သူတို့နိုင်ငံသားတွေဟာဝိုင်ယီအားလပ်ရက်ကိုမတတ်နိုင်ကြဘူး။
ချမ်းသာသောခရီးသွားများအားကာကွယ်ဆေးမပေးမည့်အစား Hawaii သည်ကာကွယ်ဆေးမှ ၀ င်ငွေကိုမထုတ်ပေးဘဲလိုအပ်နေသောနိုင်ငံများသို့အဘယ့်ကြောင့်မပို့သနည်း။
ကာကွယ်ဆေးခရီးသွားလုပ်ငန်းမှာမှားတာမရှိပါဘူး။ ဆန်မာရီနို၊ အစ္စရေးနှင့်အခြားနိုင်ငံများစွာတွင်ကာကွယ်ဆေးထိုးခရီးသွားလုပ်ငန်းသည်တိုးတက်လာသည်။ ပြဿနာသည်စာရင်းဇယားများညစ်ညမ်းစေခြင်းနှင့်မှားယွင်းနေသည်သာမကရာဇ ၀ တ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။
ဟာဝိုင်အီမှာအရေအတွက်အများကြီးနဲ့လျှို့ဝှက်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုနဲ့လုပ်နေတာ - ဒီလုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဂူအမ်မှာတရားဝင်မြှင့်တင်ပြီးလူသိရှင်ကြားကြေငြာတယ်။ ဂူအမ်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဘုတ်အဖွဲ့.
လာအိုသည်တစ်နိုင်ငံလုံး Lockdown ကိုသြဂုတ် ၁၈ ရက်အထိသက်တမ်းတိုးသည်
IMEX America တွင်အခမဲ့ Pre-show သင်ယူခြင်း
Tourism Seychelles“ မြောက်အမေရိကနှစ်ပတ်လည် ...
Alaska လေကြောင်းလိုင်းရဲ့ VP အသစ် Donald Donald Wright ကဘယ်သူလဲ။